REER SOMALILAND MAXAY RUNTA UGA HADLI LA’YIHIIN | Harowo.com
REER SOMALILAND MAXAY RUNTA UGA HADLI LA’YIHIIN
Dorashadii Gobolada Somaliland ka dhacday ee lagu tilmaamay in ay ahayd mid si fiican u dhacday maxaa ta Gobolka Saylac gaar ka dhigey. Dad badanbaa u haysata in Gadabuursi iyo Ciise iskaga horyimaadeen natiijadii doorashada Gobolka. Qadiyadan Saylac waa mid la abuuraayo oo an sal lahayn. Waayo Ciise uu ogyahay inta u le’eg yahay. Ayaa u sabab ah in ay ladan qabiil isaga horyimaadaan natiijadadii doorashada ee Gobolada kale ay ku qanceen?
In kasta oo damac Ciise meesha ka maqnayn, hadana waxa xawaasheeyey damacan waa danaha Siilaanyo iyo kuwa ay wax wada qaybsadaan ee xukuumadiisa iyo baayacmushtarka ka mid ah. Haddii la raaco xeerka doorashooyinka iyo go’aankii Gudida Doorashooyinka, wax lagu wada hadlaaba ma jireen. Waxa ku filnaa Ciise in Xuguumada Silaanyo runta u sheegto oo ay ku amarto in natiijada doorashada ay ku qancaan hadii kale ay xukuumado distoorka iyo sharciga raaci doonto oo ay waajibkeeda ka soo baxayso.
Xukuumado kama shaqayn danta guud ee Somaliland iyo sidii nabad loogu wada noolaan lahaa. Xuguumado waxay fulisay dana khaas ah oo qaybo xuguumada ka mid ihi iyo baayacmushtarku leeyihiin. Djibouti waa meesha lagu qarsado xuulaha laga dhaco ummada Somaliland. Djibouti waa meesha baayacmushtarka reer Sheikh Isxaaq ku kaydsadaan lacagtooda. Danhaas ayaa ku kalifaaya in Xukuumada Siilaanyo ayna fulin distoorka iyo sharciga wadanka Somaliland. Xukuumada Siilaanyo sinaba ugama hor iman karto danaha Ciise iyo damaca beenta ku dhisan. Xukuumada Siilaanyo waxay ku sharaf beeshay hungori iyo dana gaar ah. Haddii Siilaanyo sharciga wadanka u yaala raacaayo oo uu ka shaqaynaayo danta guud, daqiiqado ma qaadateen qadiyadan Saylac. Waxay diidayaan in ay lumiyaan muftaaxa qasnadaha u taala Djibouti iyo danaha gaar ka ah ee ay ku qabaan Dowlada Djibouti. Waxay doorbideen in Gadabuursi iyo Ciise isku gubtaan.
Siilaanyo iyo kooxdiiso waxay ugaadeen oo ayna cidna u sheegeyn in qadiyadii Somaliland ee go’itaanku ay soo daba gaabatay. Kolkaa waxay ku dadaalayaan in ay ka fara qabsaan. Marka danta gaarka ihi kaala waynaato danta guud, ma taqaanid sharci iyo ditoortoona. Haddii ayna sidaas ahayn, maxay kolba uday dhaqameed isku daba wadaan oo ay sharciga u fulin laayihiin.
Qofka maanta ka figiraaya in Somaliland xukuumadi ka jirto, beenbuu isku sheegayaa. Xuguumada ka sheegiweyday runta waxa sharciga iyo distoorku qeexeen ee iska horkeenaysa qabaailka waxa laga sugiba waa silic iyo kala yaac. Gadabuursi iyo Ciise waxa la gudboon in sidaas wax ay u arkaan oo ay isku run sheegaan. Ciisana waa in u gartaa danta nimankaasi in ayna kolaba meel u jiidaynin oo ayna wadanka Somaliyeed qayb u go’ynaynin.
Related Posts via CategoriesQaar ka mid ah Shaqaalihii lagu laayay Xarunta UNDP ee Muqdisho iyo Wadamada ay u dhasheenSWEDEN: Qoys Soomaaliyeed oo laga qaatay wiil 8 jir ah iyo Banaan-bax lagaga soo horjeedo dhacdadaa Oo Ka Socda Magaalada NEKHO Ee dalka SWEDEN (Nässjö)Hogaamiyayaasha Dhaqanka iyo Kuwa Siyaasadda Ee Samaroon oo markii ugu horeysay Kulan isugu yimid iyo C/raxman Saylici oo ku dhaartay in aanu……….WAR DEG DEG AH: Nin Galabta Lagu dilay Magaalada XariiradC/Qaadir Oromo oo Cay ula badheedhay Axmed.I.Samatar.”Prof Samatar oo caafimaad doon ah waxaa Xamar loogu sheegay dhaqtar ku xeeldheer daweynta cudurka…….haybta Profasoorka ee ah M.Case dhaqtarku waa garanwaayey, Masagada ka baxda Koonfurta ayaa la yiraa Cascase “Xildhibaanadii Ciise ee duday oo toobad keenay iyo kal-fadhigii 4aad ee golaha degaanka Saylac oo qabsoomay. DAAWO MUUQAALDaawo Barnaamuj, Booqashadii Prof Samatar degmada Dila illaa BooramaTirada Shaqaalaha Telefeshanka Somaliland looga eryay heybtooda darteed. Akhri magacdoodaDhega adeygii maamulka Siilaanyo iyo Jawaabtii Ergeyga Qaramada Midoobay ka bixiyayDAAWO Ciyaartii Kubadda Cagta Ee Hargeysa oo ku dhamaaday DAGAAL QABIILEYSAN.
Posted by haro3468 on Feb 20 2013. Filed under Harowo News - Wadan Iyo Warar.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.	1 Comment for “REER SOMALILAND MAXAY RUNTA UGA HADLI LA’YIHIIN”
Fartuun cajab samaroon
February 21, 2013 - 6:10 pm
Alla ina garansii sharaf an maanta mutaysaney haddan nahay gadabuursi,aamiin